Ultimate Monitoring App for Control Abazali ku-Cell Ucingo nekhompyutha
Ikhaya Blogs Ultimate Monitoring Lokusebenza Lokulawulwa Kwabazali Kwi-Cell Phone kanye namadivayisi wekhompyutha
Ultimate Monitoring Lokusebenza Lokulawulwa Kwabazali Kwi-Cell Phone kanye namadivayisi wekhompyutha
Kwangathi 18, 2018 Karen JosephBlogs, Ukukhulisa i-Digital
I-Digital Parenting iye yadingeka. Ukukhulisa ingane yakho emhlabeni wedijithali wesimanje lapho izingane zisebenzisa ama-cell kanye nama-computer axhunyiwe kwi-intanethi. Abazali kufanele bakhuthaze futhi basekele ukuphathwa ngokomzimba, ngokomzwelo, kwezenhlalakahle, kwezenhlalo kanye ne ukuthuthukiswa kwengqondo kwezingane kusukela ngesikhathi abanomakhalekhukhwini kanye namadivayisi wekhompyutha. Uma-ke ingane yakho ikwazi ukusebenzisa i-Smartphones Android, iOS kanye nama-blackberries nemishini ye-computer ye-MAC namafasitela futhi aphinde abe namadivayisi awo efoni ephathekayo, bese kuba abazali ongase ufune ukuba nawo indlela efihliwe yokulandelela nokulawula lokho abakwenzayo kumajejethi namadivaysi abo futhi ufuna ukusetha ukulawula kwabazali kuwo.
Izibalo: I-Intego ihlolwe ngabazali be-490
52% of kids ezincane ubudala 6 kuya 12 sebenzisa umakhalekhukhwini kanye laptop noma computer desktop. Kodwa-ke, kunombuzo obalulekile kubazali: Ingabe izingane zakho ziyazi ukuthi akufanele zihlinzeke ngolwazi lwabo lomuntu kunoma ubani ku-intanethi?
Cishe 45% Abazali bezingane ezincane abakhathazeki ukubeka ukulawulwa kwabazali emafonini abo nakumadivayisi wekhompyutha.
82% wabazali banombono wokuthi ngeke bakwazi ukunamathela njalo nezingane zabo ukugcina imisebenzi yezingane zabo ku-intanethi kanye namadivayisi kanye nemisebenzi yamagajethi ngaphandle kokuba khona kwe-intanethi
Ukusetshenziswa kwamakholi omakhalekhukhwini nama-Desktops Amakhompyutha nge-Age Group
28% esikoleni esikoleni zasenkulisa izingane zisebenzisa ama-smartphones namakhompyutha edeskithophu
52% Izingane ezisesikoleni samabanga aphansi zisebenzisa ama-computer namakhalekhukhwini
67% abantwana abafunda esikoleni esiphakathi bafunda ama-computer ama-desktops namafoni omakhalekhukhwini
67% esikoleni esiphakeme ukuya izingane kanye nentsha besebenzisa ama-desktops namafoni axhunyiwe kwi-intanethi
Abazali bakhathazekile ngezingozi ze-intanethi
Izingane ezincane kanye intsha ingabelana ngolwazi oluyimfihlo nabantu abangaziwa nge-intanethi ngefoni nomshini wekhompyutha exhunywe kwi-intanethi kanye nezinhlelo zokusebenza zokuxhumana kanye namawebhusayithi wezokuxhumana.
Ukusebenzisana nama-cyberbulator njengama-stalkers, ama-cyberbullies, izidakamizwa ezingcolile ngokobulili kanye nabahlukunyezwa izingane
Ukuxhumana okungalungile okunjengokuthi ukuthumela imiyalezo
Cishe 500,000 Abaduni be-intanethi bathola ukufinyelela ezweni ledijithali njalo ngosuku olulodwa
50% kwezisulu ezincane zezilwane ezixhumene ne-inthanethi ziphakathi kweminyaka engu-10 kuya ku-15.
Kukhona a inani lezinselelo zokuxhumana nabantu kanye nezindlela zokuxhumana izingane ziyamukela ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana
Ungabeka kanjani ukulawula komzali kumakhalekhukhwini kanye namakhompiyutha?
Ngokusobala, abazali kufanele bathole ithuluzi elenza izinto eziningi, futhi bakuvumela ukuba wenze ngokwezifiso izinketho zakho zokulawula, ngokuqondile okuqukethwe izingane zakho ezikwazi ukufinyelela kuzo futhi zigcine kodwa hhayi okungenani ugcine iso emisebenzini eyenziwa nguwe izingane ezingxenyeni zabo ze-Smartphones ne-laptop noma ideskithophu. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi elingasiza abazali landelela imisebenzi yemidiya yezenhlalo yomphakathi, ucingo lwezingcingo ezingenayo noma eziphumayo nezombhalo wezingane kanye nentsha kumakhalekhukhwini. Noma kunjalo, abazali kufanele bafune software best control software ukuthi ekugcineni ukuqapha amakholi namadivayisi wekhompyutha.
Sebenzisa i-TheOneSpy Parental Monitoring App ye-Cell Phones nama-computer
I-Digital parenting blunders ukuthi wonke umzali kufanele agweme ukuze avikele izingane kanye nentsha kusuka ezingozini online. Bangasebenzisa ithuluzi eliphelele nelithembekile elinika abazali amandla okubeka ukulawula kwabazali kuma-Smartphones nemishini yekhomputha esebenza nge-OS ehlukile. I-TOS iyaziwa ngokuba okungcono kakhulu isofthiwe engcono kakhulu yomzali ngaphezu kweminyaka.
Izikhwama zohlelo lokusebenza lokubeletha zingathatha isikhathi esincane ngaphambi kokuthi ukwazi ukusebenzisa wonke amathuluzi anamandla ukuze uhlale uvuselelwe mayelana nakho konke imisebenzi eyenziwa izingane kanye nentsha kumadijethi abo kanye nedeskithophu yekhompuyutha kanye nemishini ye-laptop kuze kuphele. Ngokungangabazeki, kuwukuthi Isixazululo sokubeletha nge-digital for parents "Technophober" kanjalo. Ngaphezu kwalokho, zonke izixazululo zokuxazulula izixazululo ezinkulu zokubeletha zivumela abazali ukuba babeke ukulawulwa komzali okuqinile futhi okunembile kumajubane nezinsimbi zamantombazane.
Ungathola kanjani uhlelo lokuqapha lokugcina lokubeletha ngamafoni nomakhalekhukhwini?
Konke okudingeka ukwenze ukufaka Isofthiwe yokuqapha yabazali i-TheOneSpy efonini yakho eqondisiwe noma edivaysi yekhompyutha. Uma usufake kufoni yeselula ye-Android, iOS kanye nama-blackberries kanye nakudivayisi ye-MAC ne-Windows. Isinyathelo esilandelayo okudingeka usibambe ukuwusebenzisa ekusebenziseni ucingo lweselula bese ufinyelela kuphaneli yokulawula inthanethi ngeziqinisekiso ezinikeziwe ngesikhathi sokubhalisa. Ungathola ukufinyelela kwizixazululo eziningi zamangqamuzana namadivayisi wekhompyutha. Ngisho nawe ungayisebenzisa software yokulawula abazali yeziguli ezincane zedijithali. Kuyaziwa nangokuthi Udokotela we-TOS ophelele iziguli zedijithali. Ake sichaze wonke amathuluzi omakhalekhukhwini kanye namathuluzi esofthiwe wokulawula abazali ekulandelayo.
Sebenzisa amathuluzi okulawula omzali we-TOS omakhalekhukhwini namakhompyutha
Kukhona okulandelayo okulandelayo okusetshenziselwa umsebenzisi-friendly, okusebenzayo futhi okunembile software ye-TheOneSpy yokubeletha engasiza abazali ukuba bahlele ukulawula kwabazali kuma-smartphones nakumadivayisi wekhompyutha.
IM's Social Media
Abazali bangavikela izingane kanye nentsha kusuka ku-stalkers, ukuxhaphazwa kwe-cyber ngisho nasezintweni zokudlwengula futhi okubaluleke kakhulu kusukela ku- ukuvimbela intsha kanye nokukhulelwa kwentsha. Badinga nje ukusebenzisa ama-IM imithombo yezokuxhumana yohlelo lokusebenza lokulawula kwabazali for omakhalekhukhwini nama-computer. Ivumela umsebenzisi ukuba buka izingodo ze-IM njengezingxoxo zangasese zangasese, izingxoxo zomsindo nevidiyo, amafayela womidiya abiwe, nemilayezo yezwi.
Ukunciphisa ifoni kungabanikazi bangempela ukuqapha izingane zefoni zocingo izingcingo ngokuqopha ucingo lwekholi lokulawula komzali uhlelo lokusebenza oluvumela abazali ukuba bazi obani izingane kanye nentsha ekhuluma ngamakholi wefoni.
I-TOS hlola i-360
Izidakamizwa lezi zinsuku zingaphezu kwamasango esikoleni, ngakho-ke abazali bangasebenzisa inhloli ye-360 ephilayo ejikeleze ukulalela ukulalela nokurekhoda amazwi nezingxoxo zezingane lapho esikoleni. Ngaphezu kwalokho, abazali bangabuka futhi izibuko ezizungezile ukuqinisekisa ukuthi izihlukumezi zikhomba izingane zabo esikoleni noma cha inhloli ye-360 bukhoma amakhamera asakaza. Kodwa-ke, abazali bangavikela izingane kanye nentsha ekuhlukunyezweni kwe-inthanethi ngokuhlanganyela isikrini seskrini sefoni yengane kulayini lokulawulwa kwe-intanethi ye-cell phone ne-computer yokulawula abazali.
GPS tracker indawo
Abazali bangakwazi landelela indawo ye-GPS yezingane futhi intsha yocingo nayo GPS tracker indawo. Inika amandla umsebenzisi ukuthi abuke indawo yephoyinti yezingane ezincane ukuze azi ukuthi yimuphi indawo abakhona ngaleso sikhathi uma ephuthuma ebusuku.
Imiyalezo yombhalo inhloli
Abazali bangazi ukuthi ngabe izingane kanye nentsha banomkhuba wokuthumela imiyalezo usuku lonke uma abazali benokubhuka okuthile imisebenzi yokuthumela imiyalezo yengane. Bangabuka imilayezo yombhalo kude imiyalezo yombhalo Uhlelo lokusebenza lokuqapha kwabazali.
Umzali angakwazi susa ngokuzenzakalelayo izithombe-skrini kuyo yonke imisebenzi izingane kanye nentsha ezenza kumakhalekhukhwini abo. Noma kunjalo, umsebenzisi angasebenzisa futhi ama-skrini ama-skrini e-Windows software yokulawula abazali futhi azi imisebenzi yezingane nezintsha kumadivayisi we-windows ephathekayo.
Abazali bangasebenzisa Uhlelo lokusebenza lomzali we-MAC futhi angakwenza ukurekhoda kwesikrini se-MAC eqondisiwe ikhompyutha yedeskithophu nabazali bangakwazi ukwazi imisebenzi yezingane ezifana nokubuka okuqukethwe okungalungile.
Isofthiwe yokuqapha Windows kuyindlela engcono kakhulu kubazali ukusetha ukulawula kwabazali thola imiphumela yangempela yesikhathi semisebenzi yezingane kanye nentsha emishini yabo yekhompyutha yamawindi. Umzali angabuka uma abelana ngolwazi lwabo lomuntu siqu kumuntu ongaziwa ku-intanethi.
Phila ukurekhoda kwesikrini
Abazali bangenza isikhashana futhi babuyele emuva kumavidiyo weselula yefoni yengane yeskrini ukuqapha amavidiyo abelana ngawo futhi abheke ku-YouTube, yiliphi iphasiwedi abenzile ekhrinini labo lasekhaya leselula futhi ekugcineni kodwa hhayi okungenani ukuthi ingane isithumela imiyalezo, ixoxa futhi yabelane Izindaba zokudla kuma-social media. Bangasebenzisa ukurekhoda kwesikrini bukhoma uhlelo lokusebenza lokulawula kwabazali futhi angakwenza Facebook Phila ukurekhoda kwesikrini, WhatsApp bukhoma isikrini sokuqopha futhi Snapchat Phila ukurekhoda kwesikrini, i-password chaser, nokurekhoda kwesikrini se-YouTube.
Abazali bangasebenzisa ikhamera yekhamera yohlelo lokusebenza lokuqapha iMAC ukuze wazi ukuthi iziphi izingane nezintsha ezisebenzisa amadivaysi ephathekayo e-MAC ngokugqekeza ikhamera yangaphambili yomshini wekhompiyutha we-MAC.
Abazali bangavimbela wonke amawebhusayithi angafaneleki izingane amafasitela nohlelo lokusebenza lokubeletha kwe-MAC. Konke okudingeka ukwenze ukufaka ama-URL ezihlungi futhi akekho ozokwazi ukuthola ukufinyelela amawebhusayithi avinjelwe ku-MAC namafasitela edeskithophu ne-laptop.
Isilawuli sefoni esiseduze
Abazali bangasebenzisa umlawuli wefoni okude we-Android isofthiwe yokulawula yabazali ukuze ubuke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe. Ngaphezu kwalokho, abazali bangavimbela izingcingo ezingenayo zalabo abangaziwayo nezokugcina kodwa hhayi okungenani imiyalezo yombhalo.
Abazali bangasebenzisa isofthiwe yokukhulisa umakhalekhukhwini futhi umsebenzisi angakwazi buka wonke amawebhusayithi avakashelwe kanye nezinhlelo zokusebenza kumakhalekhukhwini wesilitshe kanye naku amawebhubhukhimakhi ngosizo lwe-app ye-control parent parent app.
I-TheOneSpy ngokuqinisekile futhi iyinhlangano yokuqapha ephelele, enokwethenjelwa, enembile futhi ephumelelayo yokusetha ukulawulwa kwabazali kumafoni omakhalekhukhwini we-Android, i-iOS kanye nama-blackberries kanye namadivayisi we-MAC namafasitela wedeskithophu nama-laptop.
I-TheneneSpy iwukuphela kokusebenza kokuqapha okuthembekile, okuthembekile, nokusebenzayo ukusetha ukulawulwa kwabazali kumafoni we-Android, amathebulethi, i-iOS kanye namadivayisi we-MAC ne-Windows amadeskithophu nama-laptop.
Tags: uhlelo lokusebenza, Umakhalekhukhwini, ikhompyutha, digital, ukuqapha, ukulawula kwabazali, Ukuba umzali
Okuthunyelwe kwangaphambilini Izinselelo Nezendinganiso Ze-Social Media ze-12 eziyingozi Okuthunyelwe okulandelayo Ingabe Izikole Eziyingozi Ukuya (Imibiko Ye-CNN Izibalo)
Umthelela Omangalisa kakhulu Wamasayithi Omphakathi Emidlalweni Emsebenzini
October 22, 2014 Karen Joseph
I-25% OFF ku-Android Premier Plan kanye ne-FREE MAC Monitoring Software
Ukude kangakanani kakhulu! Ukuqapha kwama-Employee's emails ngaphakathi kwamahora okusebenza
August 28, 2018 Nicki Marie